I-Samsung Galaxy S, eyona Android 4.2.1 Rom yomzuzwana | I-Androidsis
I-Samsung Galaxy S, i-Rom Android 4.2.1 izibuko del Nexus S RC1 ngu-Elitemovil
Ndonwabile ukunikela kuwe, emva kweentsuku ezimbalwa zovavanyo olukhulu, ngokoluvo lwam kwenzeka ntoni eyona rom ingcono nge-Android 4.2.1 kwi Samsung Galaxy S Modelo GT-I9000, ukungahlali iirom njenge IZINTO-JB , UCreedRom o Itsunami X 4.2.
I-rom ayikho enye ngaphandle kwe RC1 ukusuka kwizibuko le I-Nexus S (JOP4oD) zilungiswe kakuhle kwaye zahlengahlengiswa ngu Elitemovil kunye neqela lakhe elikhulu labasebenzisanayo kwi IHTCmania.
Kwi-rom, kufanelekile ukuqaqambisa ubomi bebhetri, kunye nokumiliselwa kwayo okunokwenzeka, kunye nohlengahlengiso kunye neeTweaks ezenza lo msebenzi ukuba ube yirom engenakulinganiswa, enye yezona zinto zilungileyo esinokuzifumana ukuza kuthi ga ngoku ngenxa yesithandwa sethu kunye nomlilo. Samsung Galaxy S.
1 Iimpawu zeRom
Iwotshi elungisiweyo (ICyberaprendiz)
Coco mandarine ivumba lokufaka
Isikrini esitshixayo esingasemva
Khubaza ukugcinwa kwe-cache
Sqlite init nguMnazim
Ukuphucula i-HW Nexus S
Iipesenti ezingama-75 ukusuka kwi-Nexus S
Ezo zivela kwirom impahla, Gingerbread, MIUI o ICS Kuyimfuneko ukuba benze ufakelo olucocekileyo ngokupheleleyo ukuqala kwisiseko JVU Android 2.3.6 kunye ne-Odin.
Abalandeli abaqhelekileyo be I-Androidsis, unayo nayiphi na i-roms ekhankanywe ngasentla, (I-RemICS-JB, iCreedRom, okanye iTsunami X 4.2), phakathi kwezinye Imbotyi yejeli Unokwenza ufakelo oluthe ngqo ngolu hlobo lulandelayo:
Kuqala sikhuphela i-rom kunye nokusetyenziswa okongeziweyo phakathi kwezizicelo zikaGoogle zemveli
Sizikopa zombini i-zips ngaphandle kokudakumba kwingcambu ye-sdcard yangaphakathi kwaye siyiyiqala kwakhona kwimowudi yokubuyisela.
Ngoku siyishiya ukuze iqale ngokutsha ngokupheleleyo, izolile ukuba iyakuthatha kancinci, phakathi imizuzu emihlanu ukuya kwelishumi, emva koko siyiqala kwakhona kwi Indlela yokuFumana kwaye siyaqhubeka nokufakwa kwezicelo ezongezelelweyo:
Sikhetha i-zip yezicelo ezongezelelweyo kwaye siqinisekisa ukufakwa kwazo.
Okwangoku Isifakeli esizenzekelayo apho kuya kufuneka ukhethe "Ufakelo oluqhelekileyo", emva koko ukhethe usetyenziso olongezelelweyo ofuna ukuba nalo kwaye ulufake kwisiphelo sakho.
Ekugqibeleni iya kukuxelela ukuba kuyafuneka ukuqala kabusha isixhobo, usinike ukuba samkele kwaye yiyo, sele unefayile entsha efakiweyo I-RC1 esemthethweni yeStock yeRom yaseElitemovil.
Iinkcukacha ezithe xaxe - I-Samsung Galaxy S, iRom RemICS-JB V2.0 ye-Android 4.2.1, I-Samsung Galaxy S, iCreedRom V13 ye-Android 4.2.1 CM10.1, I-Samsung Galaxy S, iRom VorteX 0.0 ye-Android 4.2.1 evela kwiQela leTsunami, I-Samsung Galaxy S, hlaziya nge-odin kwi-firmware 2.3.6 kunye neCF Root yayo
Khuphela-iRom RC1 port yeGalaxy Nexus, iZicelo ezongezelelweyo
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » I-Samsung Galaxy S, i-Rom Android 4.2.1 izibuko del Nexus S RC1 ngu-Elitemovil
Izimvo ezi-177, shiya ezakho
Abo bethu sele benenyathelo lofakelo olucoceke ngokupheleleyo, leliphi inyathelo lokukhankanywe ngasentla eliya kuba lilandelayo?
Ukuba uvela kwi-Jelly Bean rom kwezi zikhankanywe kwiposti okanye ezifanayo, amanyathelo endibonisa kuwo, ukuba akunjalo, kuya kufuneka uphinde uyibambe kwakhona iroma kabini okanye kathathu kuba izakuhlala kwi-bootloop.
I-rom yam yangoku yi-Ginger, i-2.3.6 (ecocekileyo) i-JVU njengaleyo ubonakalisa ukuyifaka ngaphambili.
Ngamafutshane kuya kuba:
Faka i-2.3.6 (ongenayo)
Faka ifayile yeCF
Kwaye ukusuka ebhuthini kuyenze ifake i-rom yesiko kwi-SD
Imibuliso kunye namawaka enkosi.
Ewe kunjalo, nangona kuya kufuneka uyenze amatyeli aliqela okoko kufakelo lokuqala uya kuba kwilogo.
Nge-31/01/2013 ngo-21: 48, «Disqus» wabhala:
Molo, ndinayo i-rom dmod v2.1 ene-android 4.1.2, ngaba kungayimfuneko ukuqala ngofakelo olucocekileyo? okanye ukusukela kuloo nguqulelo ndingalandela amanyathelo owabonise ngasentla?
Molo, khange ndikwazi ukumelana nayo kwaye ndiye ndaqala ukuyitshintsha i-rom, kodwa njengoko undixelele, ihlala iluphu yakuba ifakile iaroma + efakiweyo, ke ndiphinda amanyathelo alandelayo:
Zombini ezothando kunye nesifaki sevumba sele sisebenza! ngoku kufuneka ndizame kwaye ndibone ukuba isebenza njani. Kodwa ijongeka yoyikeka.
Emva kokuba nexesha elimnandi lokutshintsha iirom okwethutyana ... Ndicinga ukuba ingcebiso yakho ichanekile, kodwa:
-Ndicinga ukuba ndinokuthi yeyona BEST rom ifowuni yam ibinayo oko ndayithenga.
-Izinto ezininzi onokukhetha kuzo.
-Ayikho ingxaki kufakelo (kufuneka ufake kuphela kwi-sd x2 ukunqanda iluphu)
-Ayinaso isidlali somculo.
Beka ii-headphone kwaye isandi siyaqhubeka ukuviwa ngaphandle (nakwiifowuni ngexesha elinye)
-Ikhamera ayinaso isondeza? Akukho mboniso yemifanekiso ethathiweyo?
Yenza isebenze ukuzulazula kwedatha "kuseto lwenethiwekhi yeselfowuni". Ngaphandle koko idatha ayisebenzi kwiPepephone. Yi-intanethi kuphela nge-WiFi eya kusebenza.
-Yamkela amakhadi ama-2 angaphakathi, kodwa awazi ukuba yeyiphi iselfowuni kwaye yeyiphi i-microSD (okanye yi-sd0 okanye sd1)
Inyani yile yokuba ukuba ezi mpazamo zisonjululwe, i-rom iyakuba li-10.
Molo, ulunge kakhulu kubo bonke ... bendifuna ukwazi ukuba ukurekhodwa kwevidiyo eyi-720 kusebenza kakuhle ngaphandle kokulahla njengaleyo yecyanogenmod eyeyona nto imbi kum ... kwaye kuye kwafuneka ndibuyele kwi-gingerbread jw9 elungileyo kum kodwa ndiziphosile iimpawu zejeli yebhontshisi kunye nobugcisa obuyinika isiphelo sam enkosi.
Molo, ndiyifakile i-RemICS-JB rom kwiintsuku eziyi-7 ezidlulileyo, ngaba ibhetri ihlala ixesha elide kunye ne-RC1 esemthethweni ye-Stock Rom evela e-Elitemovil kune-RemICS-JB rom?
Ewe ihlala ixesha elide, phakathi kwe-15 okanye i-20% kuxhomekeke kwizicelo ozifakileyo.
UEusebio Puerto sitsho
Eyona ROM igqwesileyo endakha ndanayo
Phendula u-Eusebio Puerto
Ndivume ngokupheleleyo mhlobo
UJavier de la Calle sitsho
Mkhulu, kunye neeapps zikaGoogle, ufakelo lumnandi !!
Phendula uJavier de la Calle
Inomtsalane kwaye ilula ngelixa ilungiselelwe umntu.
Molweni, ndivela kwiTsunamiX 4.2 kwaye ndiyifakile i-rom kunye nezinye izicelo kwaye emva kokubeka ikhowudi ye-sim ndifumana umyalezo othi "Ukuseta iWizar ime", yintoni le nto ibangelwa yile?
Molo, ndinayo iVortex 1.0, undicebisa ntoni, ingcono okanye imbi kunale?
Kwaye ukuba ndigqiba ukufaka ... ndiyaqhubeka kufakelo njengoko uchaza:
Ukuba oko kuya kwanela.
Nge-01/02/2013 ngo-01: 24, «Disqus» wabhala:
Ndiyabulisa kuFrancisco ... into endingayifumaniyo yi-IPR
Molo, ndivela kwiTsunamiX 4.2 kwaye ndiyifakile i-rom kunye nezinye izicelo kwaye emva kokubeka ikhowudi ye-sim ndifumana umyalezo othi »Ukuseta iWizar imile»
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukulungisa?
Phinda uyifake, uyivumele ukuba iqale kwakhona kwaye emva kokuqala kwakhona okuqhelekileyo ifake usetyenziso olongezelelweyo lokusula i-cache kunye nokusula i-dalvik cache. Nge-01/02/2013 11: 32, "Disqus" ubhale:
Emva kokufaka i-gapps kunye nokufaka ipini kuyo undixelela ngelishwa ukuseta iWizard ime, ngaba ukhona umntu owaziyo ukuyilungisa?
UIsmael IH sitsho
Kwenzekile kum, ndenze ufakelo olucocekileyo lwe-0 ...
Phendula Ismael IH
KWI-ADVANCED OPTIONS / ROM UPDATE ithi kukho uhlaziyo olukhoyo (JOP40D) uguqulelo lweBeta 6.
Yintoni ucebisa uFrancisco ukuba ayihlaziye okanye hayi?
Ungayihoyi njengoko inguhlobo oludala. Okwangoku i-yaos ayisebenzi ukuvuselela i-rom
Nge-01/02/2013 ngo-16: 03, «Disqus» wabhala:
Enkosi kakhulu, Francisco. Ukuphendula ngokukhawuleza. Kwaye ngaphezulu kwako konke ngomsebenzi owenzayo.
Ndifuna ukuzama iVortex 1.0 kunye neTsunami 4.3, kodwa emva kokuzama le rom, ndicinga ukuba ndiza kuyigcina okwexeshana.
Sele ndikuxelele ukuba okwangoku lelona xesha lifanelekileyo esinokulifumana kwiGPS S yethu, okanye mandithi, i-Galaxy S engacimi mlilo kunye nomtsalane, esona siginali silungileyo ngalo lonke ixesha.
Molo ndahlala kwiRhamncwa 4.2.1. Ukusuka eLinaro kuba iyandisebenzela, nangona ibhetri iyaphela ngokukhawuleza ukuba incasa yam, ke ndiza kuyizama le. Ngaba kufuneka ndiqale kwi-JVU ecocekileyo?
Ayisiyo yokuba usula kathathu kunye neefomathi endizibeke kwisithuba sanele, xa ufaka ii -apps ezongezelelweyo yenza isahlulo sokucoca kunye nokucima i-dalvik cache ngaphambili
Enkosi uFrancisco. Ukufakwa ngokugqibeleleyo kunye nokuvavanywa. Ndiyathanda ndiyathanda
Kule mpelaveki ndiza kwenza iposti malunga nohlobo olutsha lwe-rc2 rom hlala ubukele
Nge-02/02/2013 ngo-16: 52, «Disqus» wabhala:
UVictor fernandez sitsho
Wonke umntu unomdla njengam!
Phendula kuVictor Fernandez
kha wuleza sitsho
Molo, uyazi izibonelelo okanye izinto ezingalunganga nge-cyanogenmod 10.1? Ngaba ukhona umntu othelekise ubomi bebhetri kuzo zombini?
Eli lizibuko ngqo le-Nexus S rom uqobo, ngelixa iCyanogenmod isekwe kwikhowudi yayo yemithombo.
Ndikhetha le, kuba ukusetyenziswa kwebhetri kungcono kakhulu, ukongeza kuko konke ukusebenza kunye nokuphendula.
Yizame kwaye uza kubona ukuba awuyi kuzisola njani, izimvo zabasebenzisi ziyayivuma.
enkosi, ndiyakulandela ingcebiso yakho
Rom entle kakhulu kwaye Siyavuyisana nomsebenzi wakho. kodwa ndinengxaki encinci andazi ukuba ndiyisombulule njani (ngokuqinisekileyo kulula kakhulu), xa ndimamele umculo endinawo kwi-sd yangaphandle, akukho mdlali unokundifumanela, kufuneka ndivule ifayile yokuhlola kwaye umamele nganye nganye iphinda inkqubo. iguqal eneefoto kunye neevidiyo ezigcinwe kwangaphandle. Naziphi na izimvo? Ndiyabulela kwangoko.
Yeyiphi into engaqhelekanga, ndinayo kwi-sd yangaphandle kwaye iyivelisa ngokugqibeleleyo, kunye neefoto.
Qalisa kwakhona ukubuyisela kwakhona kwaye wenze ukwahlula i-cache kunye nokususa indawo yokugcina i-dalvik cache, emva koko uqalise ukusebenza kwaye uyinike imizuzu elishumi ukuya kwishumi elinesihlanu ukulinda ukuba iskena imithombo yeendaba esuswayo kwaye ihlaziya iilayibrari.
Ngo-Feb 1, 2013 20:35 PM, uDisqus wabhala:
Akukho nto, ndisafana. Ndiza kuzama ukuyifaka kwakhona, xa nditshekisha imithombo yeendaba, iskena kuphela i-sdcard, hayi i-microsd ebonakala kumhloli wamazwe njenge-emmc. kuba usetyenziso alundifumani iifoto okanye iividiyo okanye iispredishithi okanye umculo ofakwe kwimicro. Enkosi kunjalo. Ukuba kukho into eyenzekayo kuwe ... ndiyazama. Umbulelo wam ngomsebenzi wakho.
Ngapha koko akukho mdlali womculo. Ngaphandle koko indenza ndifane neqabane.
Kuya kufuneka ubeke i-rom kwimemori yefowuni (hayi eyangaphandle) yenza ufakelo ngaphandle kwe-micro sd ukugqiba ukufakela kwaye ekugqibeleni uyibeke, uqalise iseli kwaye uyibone iya kuzamkela zonke iifayile zemultimedia onazo!
I-Rc2 iphumile ngohlaziyo olutsha lwe-neon 0.3 kernel !!!
Sele ndinayo engqondweni, kule mpelaveki ndiza kuyifaka kwaye ndizame ukuyivavanya kakuhle
Molo, bendine-vortex oo kwaye ihlaziyiwe kuphela kwi-cyanomod ukuba ijeli yebhontshisi ukusuka kwi-400mb ukuya kwi-370mb kwaye ukuba iimenyu okanye nantoni na imibuzo yam yile:
1- une RAM engakanani?
2-kwenzeka ntoni kum njengesiqhelo?
3-unayo imixholo okanye iziqalisi?
Enkosi kakhulu ngayo yonke into, enkosi kuwe, andikaze ndiyitshintshe le mobile kwaye ndineminyaka emi-2 nesiqingatha
Mholweni. Ndisengxakini yokwenene. Ndizamile ukutshintsha i-SGS ROM ukusuka kwi-2.3.6. kwaye kamva nge-CFROOT, nangona kunjalo, iSIM ayindiboni. Khange ndenze ikopi kwifolda ye-EFS ... umbuzo wam ... unesisombululo?
Inokusonjululwa ngokukhanyisa kwakhona i-JVU
Enkosi. Isebenzile. Kufakwe kwaye kuyathandeka.
Ndiqaphele ukuba ukugubungela kuye kwehla (ngaphambi kokuba ibe nemivimbo emi-4 ngoku kungu-2 kuphela). Ukugubungela indawo kwanele kuba enye into ephathekayo endinayo "igcwele" .. Inokuba luqwalaselo lwe-rom?.
Kwenzeka into efanayo kum. Ndinendawo encinci yokugubungela apho bendikhutshwe khona ngaphambili.
Oko kwenzeka kum xa ndatshintsha i-ROM okokuqala, ngaba ifowuni ivuliwe? Ukuba kunjalo, leyo yingxaki, kuya kufuneka ubuze ikhowudi yokuvula
Sawubona uFrancisco kunye nenkampani. Ndiyaqhubeka nengxaki yam encinci. Ndiyifakile icocekile, ndiyifomathile indawo yokugcina ye-usb kunye ne-microsd yangaphandle ye-16Gb. Ndizidlulisile iifayile apho bendinazo, kodwa zonke iifayile endinazo kwimicrosd, nokuba ngumculo, iividiyo zePdf, ezigqwesileyo… ..ukuzibona okanye ukuzimamela kufuneka ndihambe nomhloli wamazwe ndikhethe zona zibe nye Nye. Ngomhloli weengcambu ndiyabona ukuba ikhadi lam le-microsd livela njenge-emmc kodwa kugcino ndine-sdcard 0 (imemori yefowuni) kunye ne-sdcard 1 (microsd). Ngaba ndenze impazamo? Ngaba kufuneka ndenze into ukuze umculo, ividiyo ... isidlali sizamkele ngokuzenzekelayo njengezo ndinazo kwindawo yokugcina i-usb?
Kwenzeka into efanayo kum. Ayinaso isidlali somculo.
I-GPRS ayindidibanisi. Ikhamera ayinaso isondeza. Kwaye ndibeka ii-headphones kwaye inokuviwa ngabo nangeselfowuni.
Kuya kufuneka benze iFlash ngokususa i-Micro SD ngaphambili kodwa xa befuna ifayile yemultimedia kwisicelo ayizukuvela, ndinexesha lokuzama iiROM ezininzi kwaye ngaphambi kokuba le ibe yingxaki.
Ukugqibela kwam ukuyifaka kwakhona, ndiyenze ngokucocekileyo, ngokusebenzisa i-odin flashee ifaka i-JVU ngaphandle kwe-sim khadi okanye i-microsd ... thatha isifundo kwi-leta, kanye xa ndisebenza naphambi kokufaka i-microsd ndiyifomathile emva koko ndayazisa kwaye saqhubeka ngokufanayo. Ndifumene isisombululo nge-Directori bind application…. iyadinisa kodwa iyandisebenzela.
Kwaye nje ukuba uthathe isithombe. Awunamboniso? Kuya kufuneka ndibakhangele kwiselfowuni yam. Yinto engaqhelekanga kanjani.
Molo, ngesiqhelo ndiyazilinganisela ekufundeni nasekulandeleni ileta imiyalelo osinike yona kunye negalelo lamaqabane. Ngenxa yokuvela okuhle okusixelela ngale rom, ndaye ndagqiba kwelokuba ndiyifake. Ndivela kwisilwanyana 4.2.1 nangaphambi kweCreedRom. soloko ujonga ubumanzi kunye nokusetyenziswa.
Inyani yile yokuba ngexesha lofakelo, bendisetyenziselwa into yokuba xa ndingena kwiakhawunti ye-gmail, inkqubo ifake ngokuzenzekelayo zonke iiapps endizikhupheleyo kwiVenkile yokuDlala. Kulunge kakhulu kum. Ndiyabona ukuba ngaphandle kokuba ndenze into engalunganga, akunjalo kule ROM. Nasiphi na isiphakamiso? okanye kuya kufuneka ndifakele usetyenziso ngalunye?
Imibuliso kunye nombulelo ngokwenza ubomi bethu bube lula kancinci.
Ukuba wenze ikopi yogcino lweeapps zakho ngogcino lwe-titanium, kuya kuba lula kuwe ukuzibuyisela, nokuba kunjalo ukhetho lokubuyisela ii -apps ngeakhawunti ye-gmail, kum yabonakala, kwaye ngokuqinisekileyo kukho ukhetho ngaphakathi ivenkile yokudlala kuseto lokuseka iiakhawunti kwiakhawunti yakho, andikhumbuli ngentliziyo, kodwa ndicinga ukuba bekukho ...
Ngokombono wam othobekileyo, isitalato, eyona ROM ilungileyo ukuza kuthi ga ngoku nge-i9000 !!!
molo… .Ndiyifakile le rom kwaye ayidibanisi i-wifi yam .. ..ndinokwenza ntoni….
Jonga ukubethela kwesitshixo ... kwenze kube ngokufanayo ... wep okanye wpa ... ndibenengxaki efanayo kwaye ndicinga ukuba yiyo leyo ...
I-ROM ilungile. Ngokuqinisekileyo yeyona nto ilungileyo kuye kwafuneka ukuba ndithandane nayo. Umbuzo wam ngulo: Ngaba uyazi nayiphi na usetyenziso ukumamela unomathotholo ngehardware ngaphandle kokusebenzisa iWifi okanye i-3G? Ndifundile ukuba ezinye ii -apps ziyosa isithethi sakho. Enkosi.
Molweni nonke, ndiyifumene i-bug encinci kule ROM, ndinayo iwizard yokuyihlaziya ibe yi-RC2, ndiyivuselele kodwa ndiyaqhubeka nokufumana ii-updates rhoqo, ndiyazenza kodwa ziyafana, ndine-RC2 kuba ine-RC0.3. I-neon XNUMX kernel, imibuliso
Kwiposti yoqobo, bathi okwangoku, akukho tyala lokuyihlaziya.
Ewe. Kuyinyani ukuba kwenzeka into efanayo kum, kwaye ndiye ndajonga kwaye ukuba ine-neon0.3 kernel, oko kukuthi, iyahlaziywa, kodwa nangona kunjalo kwi-ota, ufumana olu hlaziyo kwakhona ... into engaqhelekanga, kodwa ayibulali ... hehe
Ukuba iyacaphukisa ngoba xa uvula iselfowuni, ufumana uhlaziyo, kodwa uyalicima kwaye kunjalo ...
Inamanani njengoko ndiphawula ngezantsi:
Ukuba inomdlali, ungayikhuphela kwivumba, i-GPS inokuqwalaselwa nge-GPS enomsindo kunye nokulungiswa kwe-GPS kwaye inyani kukuba iphucula kakhulu. Kum, ikhamera kunye neefowuni ... ayenzeki kum. Usombulula into yokuhamba kwedatha ngokubeka imodem ye-KF1, ikwasusa i-R ekuzuleni, kunye nomphathi wefolda yohlobo lwe-ES, uya kuba namakhadi ahlukaniswe kakuhle, ndiyathemba ukuba ndikuncedile ukusombulula into. NGOKUPHATHELELEYO
Molo, enkosi kakhulu ngokuphendula imibuzo yam.
Ngubani igama lesicelo somdlali? Ndingaqala njani kwakhona ivumba ngaphandle kokucima nantoni na ngaphambili?
Ndiza kuzama ukulungisa i-GPS, kodwa masihambe, i-rom ilungile, kodwa ukuba inezo bugs zincinci ... iyenza nzima ukuyenza igqibelele, ingatsho ukuba kuthatha ixesha ukuyenza i-100 % esebenzayo.
Uhlelo lokusebenza lomculo "ludlala umculo", uphinde uphawule ivumba elimnandi kunye ne-apss engekhoyo, kwaye emva koko uyayiqonda yonke kwakhona. Ukubulisa
Umdlali ngumculo odlalayo okanye umculo wemiui.
Kuya kufuneka uphawule into ofuna ukuyifaka kwaye ezinye ziya kuba njalo.
Kuyacetyiswa ukuba wenze isahlulelo sokucoca kuqala kwaye usule i-dalvik cache. Nge-04/02/2013 18:58 PM, «Disqus» wabhala:
Hi ndlela leyi, ENKULU POST LE, francisco ruiz ... ungum ** ta umatshini!
lol, bendikulandela okwethutyana kwaye inyani indincede kakhulu….
ULuis Fernando Panozo Visalla sitsho
Jonga ndingafaka eli gumbi kumthala wam we-GT i9003 impendulo nceda
Phendula uLuis Fernando Panozo Visalla
Beka eli qabane, lihamba kakuhle
Ukuphuculwa kwe-RC2? Ngaba kufanelekile ukuba uyihlaziye? ..kuba ngokwale nto iyamangalisa
URamon Osorio sitsho
Ngaba le rom ingafakwa kwi-Galaxy S I9003 ???
Phendula kuRamon Osorio
Ukuba ujonga amagqabantshintshi ngeposi uyakuqonda ukuba sele ndiwuphendulile lo mbuzo, kodwa ke ndiza kuwuphendula kwakhona, HAYI
UMarc FCB sitsho
ekuseni, okokuqala enkosi ngegalelo likaFrancisco. Ndinombuzo malunga nokuba yeyiphi iROM ekufuneka uyifakile ngaphambi kokuba udlulele kule intsha. NdineMIUI 4.1.1 (https://www.androidsis.com/samsung-galaxy-s-rom-miui-v4-1-jelly-bean-muchopoli83-version-2-9-7/), njengoko usitsho, kufuneka ndiye ku-2.3.6 okanye ndingaya ngqo kule intsha? Ndiyayichaza kuba iyimbotyi yejeli, kwaye ndingayenza ngaphandle kokudlula ku-2.3.6 ... enkosi ngolwazi! Ndiyabulisa!
Phendula uMarc FCB
Kungcono uhambe nge-2.3.6 kwaye uyenze ngendlela ecocekileyo, ke uya kuzihlangula kwiingxaki ezininzi.
Nge-05/02/2013 ngo-10: 52, «Disqus» wabhala:
Ummi wase-Infinium sitsho
Kulungile uFrancisco… umbuzo omnye… Ndinomnyele wegalaksi onememori ye-13 GB sd kunye nenkumbulo yenkunzi yegusha engama-396 MB, ndilicwangcise njani ikhadi le-sd okanye ndizikopa phi izicelo ukuze iselfowuni ihambe kakuhle? Ndine 32gb micro sd
Phendula kubemi be-Infinium
Unayo yoqobo okanye ngerom ephekiweyo?
Uxolo ngokungalibazisi ... umsebenzi ... ndinayo le rom
UGorky Tarr sitsho
Ngaba kufanelekile ukuphucula ukuya kwiRC2?
Phendula Gorki Tarr
Nge-10/02/2013 ngo-15: 20, «Disqus» wabhala:
Enkosi!!! Ungumatshini !!! 1 UKUBULISA !! 🙂
Molo, ndingathanda ukwazi ukuba ndingayifumana njani irediyo ye-FM? yonke into igqibelele enkosi
Kwenzeka kum njengokurekhodwa.Ungayifaka iRadio FM?
Ayisiyo irediyo ye-intanethi kodwa ineselfowuni
Kuya kufuneka usebenzise iSpirit FM, kuphela kwendlela esebenza ngayo
Akukho radio ye-fm yoqobo yeenguqulelo ezingaphezulu kwe-Android 2.3.6. Isizathu kukuba i-Samsung ayiyikhuphi ikhowudi
Nge-10/02/2013 ngo-22: 05, «Disqus» wabhala:
Ndine-RC1 kwaye ndilandele amanyathelo okufaka owatshoyo kuba bendicinga ukuba akukho nto yenzekileyo xa ndinika uHlaziyo lwe-OTA. Ngeli xesha kubonakala ngathi ifakiwe, ndiqala kwakhona ngonodoli we-Android, kwaye ekupheleni kwayo yonke inkqubo ndifumana isaziso sohlaziyo lwe-OTA ukuba kukho inguqulelo entsha: kwakhona iRC2 kwaye andinawo umdlalo Ivenkile efakwe (ngaphambili ukuba bendikhona) Ndiyisombulule ngokufaka i-Gapps kwakhona. Ndizamile amaxesha ama-2 kwaye andinakwenza nto.
Ngoku umbuzo wam ulandelayo:
Yeyiphi inkqubo endimele ndiyilandele yokukhuphela i-RC2 ngaphandle kohlaziyo lwe-OTA kwaye ndiyifake njengoko ndenze okokuqala kwi-RC1 kodwa ngaphandle kokuphulukana neeapps zam kunye noseto?
Ndinesipele kunye neTitaniumBackup kodwa ndibuyisela yonke into enzima kakhulu.
Khuphela i-rom kwi-pc, ikope kwi-sdcard yangaphakathi kwaye uyikhanyise ngokususa isahlulo se-cache kunye nokusula i-dalvik cache.
Emva koko kuya kufuneka uphinde ukhanyise i-zip ye-gapps ngokwenza ulwahlulo lwe-cache kunye ne-dalvik cache ngaphambi nasemva, ngale ndlela awuyi kulahla nto.
Ngo-Feb 12, 2013 16:33 PM, uDisqus wabhala:
Ndiyenzile nje, kwaye ilandela isaziso soHlaziyo lwe-OTA ngaba ikhona indlela yokujonga ukuba ndinayo na inguqulelo yamvanje?
Enkosi kakhulu ngengeniso yakho,
Into yokuqala kukuba andinalwazi lungako, kodwa ndingomnye wabo balandela imiyalelo inyathelo ngenyathelo.
Kwimeko yam ndineGingerbread, ndiye ndangena kuqala kwikhonkco le-JVU Android 2.3.6 kunye ne-Odin.
Uthetha ukuthini ngofakelo olucoceke ngokupheleleyo? Ngaba ndiwalandela onke amanyathelo eli khonkco lokugqibela okanye ndibeka iROM 4.2.1, endaweni yelinye? Ngaba kuya kufuneka ndikhuphele usetyenziso olongezelelweyo?
Ndiyabulela kwaye uxole ukungazi kwam
Ukufakwa okucocekileyo kufomatha yonke into ukusuka ekubuyiseleni, (i-cache, idatha, idatha kunye nenkqubo).
Izicelo ezongezelelekileyo kufuneka zikhanyiswe kuba ukuba awuzukufumana ii -apps ezibaluleke njenge-gmail okanye ivenkile yokudlala
Ngo-Feb 14, 2013 01:00 PM, uDisqus wabhala:
Ugqibelele, enkosi kakhulu.
Sele ndiyisebenza kwaye ndonwabile ngobomi. Ndineengxaki ezimbini kuphela: andinakho ukuqhagamshela kwii-Kies ukufumana abafowunelwa kwaye andinayo iGPS… ndingayisombulula njani?
molo ulunge kakhulu, ngaba iyahambelana ne-galaxy s plus? Ndiyabulela kakhulu
UCarlos G. sitsho
Molo kuqala ndikuxelele..umsebenzi ogqwesileyo kodwa ndinengxaki, ndafaka i-RC1 ndaze ndayihlaziya kwi-RC2 ukuba yayihamba kakuhle kodwa ngequbuliso yaqala ukuziqalela kwaye yenzeka rhoqo.Ngaba ungandixelela ukuba ingaba ingunobangela?
Ndithetha ukuba, loluphi uhlobo lokusula olwenzileyo okanye wenze okucocekileyo?
UFrancisco ... Ndiyakudinga
Nge-18/02/2013 ngo-22: 18, «Disqus» wabhala:
UFrancisco ... uncedo oluncinci nceda ... NdineGlass S nge-rom yeli phepha efakwe kwi-Galaxy S 396 MB nakwi-USB yokugcina eyi-13,41 GB. Ukongeza ndibeke i-32 GB encinci ye-SD. Ngaba ndingayiphucula imemori ye-RAM nangayiphi na indlela? yeyiphi imemori ebhetele ukufaka usetyenziso olungagqibekanga? kwaye ndiqaphele ukuba ndinogqatso olubi (i-Orenji) endlwini yam, andazi ukuba kungenxa yeROM, ukuba ndiyitshintsha imodem ingaphucula? Ndine I9000XXJVT.
Kwakhona, ifowuni yam iyakhala (izaziso) kwaye andifumananga nto ... kutheni ???
Ndiyabulela kakhulu utitshala ngexesha lakho !!
Ndiyenzile ngofakelo olucocekileyo ndilandela amanyathelo okufundisa kwakho kwaye bendingenangxaki yokuyifaka.Iyinto engaqhelekanga kukuba ndiyibuyisele kwakhona kufakelo olucocekileyo kodwa into efanayo iyenzeka kwakhona ndicinga ukuba iyenzeka ngokufaka usetyenziso nge titanium
UArty alvarado sitsho
zindaba zini ezimnandi,
Phendula u-Arty Alvarado
Molo, ndinengxaki yokuba i-MOBILE YAM IXHOMEKE KANYE ISETYENZISWE KUPHELA, NDIYIFAKILE I-ROM KUSUKA KWI-2.3.6 NJENGOKO UTSHINTSHILE KANYE NDINGAYISOMBULULA NJANI?
Molo apho! Ndinemodeli ye-gt-i900, inguqulo 2.3.4 ihlaziyiwe kwivenkile yesamsung. Ityala kukuba lineminyaka engaphezu kwe-2 ubudala kwaye andisakwazi ukuphinda ndihlaziye evenkileni, nangona ndicinga ukuba akukho luhlaziyo lwale mobile nayo. Ndingathanda ukubeka le android, kodwa ndimtsha kwezi zihloko kwaye ndiyoyika kancinci. Iselfowuni "sinyulu", ndiqale ngaphi ukubeka i-android 4.2.1? Kuyacetyiswa?
Ukuhlaziya kule ROM kodwa ayivumelanisi abafowunelwa bam kuFacebook, ligama lam kuphela elivelayo xa ndiyinika ukubonisa kuphela abafowunelwa; Nge-ROM yangaphambili ukuba ibibonisile ... nasiphi na isisombululo? enkosi 😉
Ndinengxaki ebonakala imbi:
Kuba ndifake i-Gingerbread ecocekileyo rom, iselfowuni indicela ikhowudi yokuvula inethiwekhi xa ndifaka ikhadi le-sim. Ndikhulule iselfowuni ngaphambi nje kokuba ndibeke i-rom ecocekileyo, kwaye andenzanga ikopi yefolda ye-efs, ndingenza ntoni?
Ukuba uvula iselfowuni andisiboni isizathu sokuba ikubuze ngayo nayiphi na ikhowudi yokuvula inethiwekhi
Yolanda garcia sitsho
Ndiyakwazi ukufaka igumbi, kodwa xa ufaka usetyenziso lwendalo lweGoogle, ndifumana impazamo, ufakelo lurhoxisa ... Ndingenza ntoni?
Phendula uYolanda García
Kungenxa yokuba le fayile khange ikhutshelwe ngokuchanekileyo.
Yibeke phantsi kwakhona
Nge-23/03/2013 ngo-10: 55, «Disqus» wabhala:
Ndizakuzama, ngoba ndiyaphambana, hehehe ... igumbi likhangeleka lilunge kakhulu, lihle kakhulu, ngoku ndiza kukuxelela 🙂
Unenguqulo entsha yeRC2 ekhoyo kwiBlog.
Nge-23/03/2013 ngo-11: 00, «Disqus» wabhala:
Uxolo, ndilahlekile ... Ngaba unokubeka iblogi apha?
Ngoku ndikhangela kwaye ndiphendula ngefowuni, kuya kufuneka uyikhangele kwiindidi ze-Androidsis okanye ngasekunene ekunene enjini yokukhangela yangaphakathi.
Nge-23/03/2013 ngo-11: 12, «Disqus» wabhala:
Kulungile, ngoku jonga ... enkosi kakhulu !!! kwaye ngendlela, yayikhutshelwe kakubi, ngoku yonke into ithi «ok». Ndiza kujonga le undixelele yona, umhlobo obulisayo.
Kuya kufuneka ufumane uhlaziyo nge-ota kwiselfowuni uqobo. Nge-23/03/2013 ngo-11: 16 AM, "uDisqus" wabhala:
Gustav (iminyaka eli-14) sitsho
IFrancisco i-Android inokuphelelwa lixesha kuba ndinayo i-rc1 kwaye ndifuna ukuyivuselela kwi-rc2 ukusuka kwi-jvu 2.3.6 icocekile
Phendula u-gustav (iminyaka eli-14 ubudala)
Kuyacetyiswa ukuba uqale ukhanyise i-JVU emva koko ufake i-RC2 yokusula kwangaphambili kwi-Recovery kunye nefomathi ye-cache, idatha, idatha kunye ne-sytem
ndikulungele ngoku ndinokungaphantsi kwe-4 gb yangaphakathi ndine-1.56gb yangaphakathi xq ????
UFrancisco enye into xa ndihlaziya i-rc1 ndenze konke ukosula kunye nezinye izinto ndaphazama kwinto enye xa ndingena kwimowudi yokubuyisa ixesha lesibini ukugqiba ukufakela ndenze ukuseta kwakhona idatha kumzi-mveliso kodwa xa sele kugqityiwe oko kuchaphazela I-galaxy yam ye-samsung ye-android Ngaba ingxamisekile ndiyoyika ???? (ayinamsebenzi ukuba umntu angandinceda)
UFrancisco enye into xa ndihlaziya i-rc1 ndenze konke ukosula kunye ne
ezinye izinto ndikhumbula enye xa ndingena kwimowudi yokubuyisela
Okwesibini ukugqiba ukufakela ndenze umzi mveliso wedatha
Ukusetha kwakhona ngakumbi xa sele kugqityiwe kuchaphazela i-samsung galaxy s ye-Android? Kwaye okokuqala xa ukuyifaka akuthathanga ngaphezulu kwemizuzu emi-5 bekufanele ukuba bekungekho kwanto eyi-3 kwaye khange ndiye ekhaya kwaye icinyiwe
(ayinamsebenzi ukuba umntu angandinceda)
Enye into i-galaxy s icime kakhulu ukusukela uhlaziyo kutheni ???
Hayi ndinobunzima, ndifuna ukufaka le rom kumthala wam, ngenxa yoko kufuneka ndiyenzele imowudi ecocekileyo kodwa ndinamathandabuzo okuba ukuba ndiyayifaka, abafowunelwa endinokuxhumana nabo kunye nosetyenziso lweefowuni ezigciniweyo ziya kucinywa?
Xa usenza idatha yokuseta kwakhona yefektri, zonke usetyenziso kunye nedatha kwiselfowuni yakho ziyacinywa.
Into onayo kwi-sdcard yangaphakathi nangaphandle ayicinywanga.
Ngaba ikhona indlela yokufaka kwakhona iROM efanayo ngaphandle kokucima usetyenziso?
Yenza ukhuphelo lwezicelo zakho, abafowunelwa, njl, njl ngenkqubo yasimahla enje ngeTitanium Backup, kwi-Androidsis unendawo epheleleyo malunga nendlela yokuyisebenzisa
Sele ndinayo indawo yogcino kodwa kuluphi ulwahlulo apho usetyenziso olufakelweyo olugciniwe kunye nalapho ikwi rom?
Nge-Mar 26, 2013 4:58 pm, "Disqus" wabhala:
Awudingi ukwazi ukuba yeyiphi na into efakiweyo okoko i-Titanium yogcino ifakiwe ngokuzenzekelayo.
Ithunyelwe ngeWindows Mail
Kuthunyelwe nge: Lwesibini, Matshi 26, 2013 22:34 PM
Amagqabantshintshi athunyelwe kwi-androidsis
Sele ndinayo indawo yogcino kodwa kuluphi ulwahlulo apho usetyenziso olufakelweyo olugciniwe kunye nalapho ikwi rom? Nge-Mar 26, 2013 4:58 pm, "Disqus" wabhala:
5:34 pm, NgoLwesibini Matshi 26
Hlaziya olu luvo nge-imeyile
Idilesi yemeyile: federicolang@gmail.com | Idilesi ye-IP: 209.85.219.42
Phendula kule imeyile ngo "Cima", "Vuma", okanye "Spam", okanye ulungelelanise ukusuka kwipaneli yokumodareyitha ye-Disqus.
Izimvo zikaFedericoX ziphendula uFrancisco Ruiz:
Yenza ukhuphelo lwezicelo zakho, abafowunelwa, njl, njl ngenkqubo yasimahla enje ngeTitanium Backup, kwi-Androidsis unendawo epheleleyo malunga nendlela ...
Ufumana lo myalezo kuba ubhalisile ukufumana izaziso zeDisk Ungarhoxa kwezi imeyile, okanye unciphise izinga esizithumela ngalo ngokulungelelanisa useto lwesaziso sakho.
UYesu Moreno M sitsho
molweni kusasa ndinengxaki kwaye ndifuna uncedo lwenu olungxamisekileyo. Ifowuni yam isweleke, ndalandela onke amanyathelo, ndikhuphele zonke iifayile. Kodwa ingxaki kukuba xa kufuneka ndiyenzile lento "Sikopa zombini i-zip ngaphandle kokucinezela kwingcambu ye-sdcard yangaphakathi kwaye siyiqala kwakhona kwimowudi yokubuyisela" Andikwazi kuba andinakho ukufikelela kuba ifowuni yafa ngaphambi kokuba unokungena apho. u-quein angandinceda ukuba ndiyiqale kwi-sdcard yangaphandle. NDIKUXAKEKILE NJENGOBA NDISEBENZA NOMNXEBA FUTHI UFILE ENKOSI
Phendula uYesu Moreno M
Yibeke kwimowudi yokukhuphela kwaye uyibuyise nge-JVU firmware yoqobo.
Kwisifundo unekhonkco kwi-JVU firmware post
Nge-Epreli 1, 2013 17:20 pm, uDisqus wabhala:
UKUBA NDANDIKHE NDENZA LEYO YAYIYINTO YOKUQALA KODWA NDIQHUBILE
Yiphinde ngokubeka itsheki apho ubeka khona iifayile kunye nokumakisha kwakhona. Nge-01/04/2013 19:17 PM, «Disqus» wabhala:
ANDIQONDI NGOKUFAKA INYANGO. NCEDA UCHAZE NGCONO
Kuthetha ukuba unononophelo lokulandela imiyalelo kwileta kwaye ujonge apho ubeka khona zonke iifayile.
Kulungile sele ndiyenzile inkqubo kwakhona kodwa ngeli xesha ndilufumene uncedo kwimeko yokuba kwenzeke into ethile kum kodwa ndisafana andikakwazi ukubeka iifayile kwingcambu yefowuni sdcard. Ndingazibeka kuphela kwii-sdcards zangaphandle kodwa andikwazi ukuyifunda kwimowudi yokubuyisela
Iposti enkulu! Ngoku ndiza kufudukela kwiRC2 kwaye into endinayo ngoku yiTSUNAMI 4.8. Ndingaya ngqo kwi-Rc1 okanye ndiye kudlula ku-Odin kuqala ndibeke i-2.3.6?
Ihlala icetyiswa kodwa ungayenza ngokuthe ngqo ngokwenza ezosuli zintathu kunye nokufomatha i-cache, idatha, idatata., Kunye nenkqubo.
Nge-06/04/2013 ngo-11: 10, «Disqus» wabhala:
intlaka yokuqhumisa sitsho
Molo, ndihlaziye i-galaxy S ukuya kwi-2.36 ndayihlaziya kwi-CF-ROOT ngefayile oyibonisa kwi-OIN3. Ndiqinisekisile ukuba ndinesiphelo sendlela kunye nokufikelela kwengcambu kunye nesicelo se-ROOT CHECKER. Kodwa xa ndifaka iifayile ze-zip kwi-sdcar kwaye ndizama ukuvula iselfowuni kwimowudi yokubuyela kwakhona (ikhi yevolumu + yamandla + imo) ayenzi nto, unxantathu ofanayo ubonakala njengangaphambili ngegama lokukhuphela. Yintoni endiyenzayo engalunganga? Imowudi yokukhuphela ayifani nemowudi yokubuyisela? Ungandinceda ???
Umthamo phezulu + ekhaya + amandla
Nge-07/04/2013 ngo-11: 18, «Disqus» wabhala:
yile rom ye-gt gt-i9003l? ndingayifaka nge-odin?
molo ulithanda eli gumbi umbuzo omnye nje wokwenza isandi somntu ofowunayo ingoma enkosi
Molo ulungile, ndingumkhwetha kumxholo we-galaxy S GT-I9000, kwaye iselfowuni inezi zinto zilandelayo:
Inguqulelo yeFirmware: 2.2
Inguqulelo ye-baseband I9000XXJPK
Inguqulelo yeKernel: 2.6.32.9 ingcambu @ Sep-51 # 1
inombolo yokwakha: FROYO.XXJPK
Bendiqhuba kakuhle kutshanje, ngesantya esikhawulezayo kwaye ndinjalo, kodwa ndizama ukuyihlaziya ndiyilayishe kwaye kwafuneka ndiyithathe ndiyilungise kwigumbi elingaphantsi kwendlu yam, kwaye bandinike ezo mpawu kwaye inyani yile Andikwazi nokubhala phantse kuba andimi nto ngaphandle kokuba i-keyboard ivele, kwaye inyani kukuba ndingathanda ukuba umntu andincede, umntu owaziyo malunga nesihloko kuba iya kusombulula ubomi bam kancinci kuba Inkwenkwana eneminyaka eyi-19 kwaye sisebenzisa kakhulu iselfowuni kunye ne-esque ndingena kwiiforamu nayo yonke into, kodwa amakhonkco okhuphelo aphelelwe lixesha nayo yonke into .. kwaye inzima kakhulu kum.
Ukuba umntu ebenobubele ukundinceda, ndingavuya kakhulu, i-imeyile yam yile javi_bdn_93@hotmail.com
Ndivela e-Spain Spain)
Enkosi kwangaphambili, ukubona ukuba ngaba basekhona abantu abafuna ukunceda 🙂
isebenza kumthala gt-i9003l?
Ukuba uzama, uya kuyitena ifowuni.
USocrates Amador sitsho
Ndine-firmware version 2.3.6 kunye ne-baseband version com I9000XXJVU inombolo yokudibanisa iGINGERBREAD.XXU kwaye ndifuna ukuyitshintshela kule rom, yintoni ekufuneka ndiyenzile ukuze ndikwazi ukuyenza? Sele ndiyingcambu. Ndingayivuyela impendulo ekhawulezileyo kuba isisele sam ngamanye amaxesha siyabambeka.
Phendula uSocrates Amador
Landela amanyathelo okufundisa ileta, apho uya kufumana zonke izixhobo.
Molo uFrancisco, ndingomnye wabo batshintshele ku-4.2.2 we-Elite Movil kwaye sibuyela kule nto, bendifuna ukukubuza xa ndihlaziya ukusuka kwi-RC1 ukuya kwi-RC2 yi-OTA, esona sikrini siphambili singaveli nee icon, phumla ewe, uyazi ukuba bekutheni, ndifuna ukubuyela kwi-RC1 kodwa andazi ukuba ndihlaziye i-RC2
Imakrofoni yekhibhodi ye-android ayiveli nangona yenziwe yasebenza? zombini eziphambili kunye nezesibini. Ngaba ukhona umntu owaziyo ukulungisa?
UPedro Campo sitsho
Emva kokufaka le rom nokuyisebenzisa iintsuku ezimbalwa kufuneka nditsho ukuba yeyona nto intle endakha ndanayo. Ndiyakuvuyela nina bantu, nenza umsebenzi obalaseleyo
Phendula kuPedro Campo
ULuis Alejandro Chavez sitsho
mhlobo ngaba le rom iluncedo kwi-gt-i9000t ?? Enkosi
Phendula uLuis Alejandro Chavez
UMarco Lasso sitsho
Mhlobo, wonke umntu one-GT-I9000T, ungenzi nto kuba i-telcel inesitshixo kwifayile ye-sbl.bin kwaye iya kukushiya kwisibrick kuqala kuqala kufuneka ubhale ngaphezulu i-sbl.bin, emva koko ufake isantyamodkernel emva koko kamva faka i-xxjvu rom kunye neselfowuni yakho iya kuba simahla ukwenza nantoni na oyifunayo
Phendula uMarco Lasso
Yeyiphi engcono okanye i-master rom V5
ngoku indicela ipin yokuvula inethiwekhi kwaye ndazisa eyakha yakuvula umnatha wefowuni kwaye AKANDIKHONZI !!!!!!!!!! INTO ENDIYENZAYO????
Uhambisa diaz sitsho
Molo, ndingayifaka le Rom kwi-GT i9003L yam, ndivela eArgentina, enkosi
Phendula kuMoises Diaz
Ndingabeka esaz rom kwi motorola delfy yam plus
Molo, ungayifaka le ROM kwi-Samsung Galaxy ACE II? Ndinayo kwi-I9000 kwaye yibhombu 🙂 enkosi.
Hayi ngokuthe tyaba, ziitheminali ezahlukeneyo ngokupheleleyo.
Ndiyifakile iROM kodwa ndinengxaki ilandelayo: ndiqhagamshela kwi-Wi-Fi kwaye ifowuni yam iyasebenza, kodwa andinalo uqhagamshelo lwedatha kuthungelwano lwedatha, nangona ndiqinisekisile ukuba uqhagamshelo lwedatha luyasebenza. Ndifumana u "R" ecaleni kwemivalo ebonisa ukogquma. ungandinceda? 1000 enkosi
Ngenisa i-APN kwaye uqwalasele uthungelwano lomsebenzisi wakho
Ngo-Meyi 29, 2013 22:56 pm, uDisqus wabhala:
Ndifaka yonke into ngokuchanekileyo, i-gapp nayo yonke into, emva kokubeka i-SIM pin kuyo, ndifumana umyalezo wempazamo xa ndisebenzisa i-gapps kwaye ndinokucofa u-OK kwaye umyalezo uphume kwakhona kwaye andinakwenza nto kuwo
Fancisco ndinengxaki ne-SD, ayinakufunyanwa, nceda undincede
Ngaba ukhona umntu owake wayizama kwi-galaxy i9000B kwaye yamsebenzela?
Molweni nonke, ninganiki isoftvare kwifomathi, hayi i-cache okanye idatha okanye i-datadata kuba i-imei icinyiwe… .ndicinyiwe kodwa ndiyifumene …… ndenze eyokuqala ezintathu kuphela
Yiyo kuphela into ekufuneka uyenzile kwaye ukuba ukruqukile kukungena kwimowudi yokubuyisela, bakup kwaye ubuyisele kwaye ukhethe umhla ongaphambili ukuba iselfowuni ilungile ...
Sihlobo ndifuna uncedo lwakho
Ndabambeka kwimodi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo
USamuel Pardo sitsho
Ngaba inokufakwa ukusuka kwi-2.3.6 jw4 ukuba iphinde iphinde iphinde ibe yingcambu?
Phendula kuSamuel Pardo
fabio utsibe sitsho
molo ndenze onke amanyathelo njengoko kuchaziwe kwi-gt i9000 yam kwaye ngoku umntu oza kundinceda akakwazanga ukuthumela imiyalezo
Phendula u-fabio utsibe
UOsiel Rivera C. sitsho
Ndidinga uncedo, ndinengxaki ngesixhobo sam (ndicinga) ingxaki kukuba i-micro sd ayindiboni, ayindiboni xa ndiyidibanisa nePC yam, andikwazi ukugcina iifoto okanye umculo, xa ndifuna ukuthatha iifoto ndifumana umyalezo othi: Akukho kugcino lwangaphandle olukhoyo, nayiphi na ingcebiso nceda !!!! Iselfowuni yam yiGT-i9000 Enkosi
Phendula u-Osiel Rivera C
Iselfowuni yam i-GT-i9000 ayiyiboni i-micro sd, kodwa ezinye iiselfowuni ziyayenza, ndenze ntoni
Lunjani uhlaziyo olwenziwe ngu "OTA uhlaziya" JDQ39E ukuba iselfowuni indicebisa ngokukhawuleza nje ukuba ndiyifake?
UDAVID CAMACHO PALOMO sitsho
Ndiwenzile amanyathelo kodwa emva kokuba Sula idatha yokuseta kwakhona kwefektri
Sula isahlulelo se-cache andisafumani inyathelo elilandelayo ngenxa yantoni?
Phendula UDAVID CAMACHO PALOMO
Ngaba ujonge ngaphakathi kukhetho oluPhucukileyo?
Nge-04/01/2014 ngo-00: 29, «Disqus» wabhala:
Ndenze inyathelo lokuqala emva koko ndacima yonke idatha yomsebenzisi, ndosula i-cache partion, kwaye ndiphinde ndiqalise inkqubo, hlaziya i-apb kwi-ADB, isitampu sangaphandle, sula idatha / ukuphumla kweFektri, eipe cache cache kunye nohlaziyo lwe-aply kwi-cache. kodwa akukho ndlela iphambili
Ndicinga ukuba ufake ukubuyiswa okulungisiweyo akukho? ngesitokhwe sokubuyisa asisebenzi.
Nge-04/01/2014 ngo-00: 36, «Disqus» wabhala:
ndenze ntoni ???
Ndinayo i-samsung galaxy s wifi 4.2. Ngaba ndingazibona iifoto kwaye ndizicime kwisixhobo, ezikwi-sd yangaphandle okanye kwikhadi le-sd langaphandle? Yeyiphi iadaptha kunye / okanye umfundi endiya kuyidinga ukuyenza?
Molo, enkosi ngayo yonke into kwangaphambili, ndinayo i-galaxy s, kunye neBeast rom 4.2.1 eyenziwe nguMalcho evela kubaphuhlisi
Iphunyezwe kwimithombo ye-CM 10.1 kunye nekhowudi yeLinaro kuhlobo lwayo lwe-4.7, konke oku kulawulwa yi-Semaphore kernel 2.8.0b3s eyenzelwe ukubonwa ngokugqibeleleyo kweevidiyo kwifomathi ye-HD.
Ingxaki kukuba i-wifi ayisebenzi kum, ndifake i-rom ne-odin kuqala ndibeke le I9000XXJVU_I9000OXAJVU_OXA emva koko ibe ngu-4.2.1. Ukuba ndibeka le rom izakusombulula iingxaki ze-wifi? Kwaye kufuneka ndiyenze njani, njengoko ndenze okokuqala, ndibuyele kwigumbi lokuqala okanye ndiyifake ngqo kunye nokubuyisa, njengoko ubekile apha kweminye imiyalezo yangaphambili? Enkosi kwakhona……
luis franco sitsho
Nceda undinike ikhonkco lokukhuphela ukuze ndiyikhuphele
Phendula uLuis Franco
WindowsAndroid, eyona ndlela yokulinganisa i-Android
I-Samsung Galaxy S4 iya kuba yiteknoloji ye-pixel